Famantarana 17 fa olona misy poizina ianao (Fomba hahalala + ny fomba hijanonana) - Blog
“Poizina ve aho?”
Toxic dia teny iray izay nariana be dia be tato ho ato.
Fa ahoana no ahalalanao fa olona misy poizina ianao?
Inona avy ireo zavatra mety hataonao izay mahatonga anao ho lasa hery mitaona poizina eo amin'ny fiainan'ny hafa?
Izay no hodinihinay.
Inona no dikan'ny hoe manapoizina?
Amin'ny hevitry ny teny ankapobeny, ny zavatra misy poizina dia manimba olona aorian'ny fipoahany.
Misy isan-karazany ny poizina. Ny zavatra sasany dia mahafaty eo noho eo. Ny sasany kosa dia miteraka fahavoazana rehefa mandeha ny fotoana.
Mikasika ny olona dia tsy miova firy ny famaritana.
Ny olona misy poizina dia iray izay miteraka fahavoazana amin'ny hafa amin'ny alàlan'ny teniny sy ny fihetsiny.
Mbola ratsy kokoa noho ny talohan'ny nihaonany na nifaneraserany taminy ny hafa.
Indraindray io fahatsapana io dia tsapa eo no ho eo. Amin'ny fotoana hafa, miorina miadana miaraka amin'ny fotoana sy ny fiverimberenana miverimberina izy io.
Raha ao an-tsaina izany dia ahoana no ahafahanao milaza raha ianao no olona misy poizina amin'ny fiainanao?
Ireto ny sasany amin'ireo famantarana azonao jerena.
Famantarana 17 Olona misy poizina ianao
1. Mahatsiaro ho ratsy noho ny tenany ny olona nandany fotoana taminao.
Na dia tsy mora fantarina aza ity iray ity dia mandrakotra izay rehetra manaraka izy.
Rehefa avela hahatsapa ho tsy tiana, tsy ankasitrahana, na tsy mendrika ny olona iray rehefa nandany fotoana manodidina anao ianao, dia misy vintana lehibe nasehonao fitondran-tena misy poizina mankany amin'izy ireo.
Mazava ho azy, tsy afaka hahafantatra izay mitranga ao an-dohan'izy ireo ianao, fa raha mahita ny fitenin'olona ianao miharihary fa mihidy sy ratsy kokoa dia mety mahatsapa ho lo izy ireo.
Raha milatsaka ny mason'izy ireo ary toa menamenatra na menatra noho ny zavatra nolazainao na nataonao ianao, dia nandratra ny fihetseham-pony ianao.
Nandratra azy ireo ianao.
2. Manalavitra anao ny olona na hanjavona amin'ny fiainanao ho amin'ny tsara.
Angamba ny famantarana mazava indrindra fa misy poizina dia ny fomba tsy itadiavan'ny olon-kafa hifandray aminao.
Toa manana drafitra hafa foana ve ireo namanao na manala tsiny ny antony tsy hahitan'izy ireo fihaonana aminao?
Tsy manomboka fifandraisana aminao mihitsy ve izy ireo?
Toa mivoaka ny fiainanao ve ny olona fotoana fohy taorian'ny nidirany tao?
Miezaka ny tsy hiditra amin'ny hetsika sosialy ve ireo mpiara-miasa aminao?
Misy olona mahita fomba hanapahana resaka fohy aminao ve?
Rehefa mankafy orinasan'olon-kafa ny olona dia mahita fomba mazoto mandany fotoana miaraka amin'izy ireo, fa ny mifanohitra amin'izay no toa marina aminao.
Porofo izany fa mampijaly azy ireo ianao.
3. Mitsikera be ianao ary mieritreritra fa ambony noho ny hafa.
Sarotra aminao ny mahita an'izany ekeo ny olon-kafa toa azy ary hitsikera matetika ny hafa noho ny fahitanao azy fa lesoka.
Mampiasa ny henatra ianao ho fitaovam-piadiana hahatonga ny hafa hahatsapa ho ratsy sy hahatsapa ho tsara kokoa.
Ianao manizingizina fa ny olona tokony manana nanao zavatra tamin'ny fomba hafa.
ianareo manambany ny safidiny , maneso ny zava-bitan'izy ireo ianao, ary mitady hampino azy ireo fa ianao no ilay olona ‘tsara kokoa’.
Satria mino ianao fa tsy mino aho fa ambony noho ny olon-drehetra ianao.
4. Ianao dia mifehy na fanodikodinam-po.
Mikatsaka ny hanao ny anjaranao ho an'ny hafa ianao ary asaivo manao araka izay itiavanao azy.
Izany dia mifamatotra amin'ny fahambonianao ambony sy ny finoanao fa fantatrao izay tsara indrindra amin'ny toe-javatra misy anao, ho anao sy ho azy ireo.
Ianareo olona ambony manodidina ary mampiasa endrika isan-karazany famonoana olona hahazoana antoka fa mahazo ny làlanao manokana ianao.
Ny fahamalinana dia tsy herinao. Azonao atao ny miteny mivaivay sy tsy mahalala fomba ka manaitra ny olon-kafa.
5. Tsy miala tsiny na miaiky ny tsy mety nataonao mihitsy ianao.
Miala tsiny fa tsy teny mandalo ny molotrao matetika.
Rehefa dinihina tokoa, fantatrao tsara.
Na dia miharihary amin'ny manodidina aza hoe iza no diso, dia miaro mafy ny toerana misy anao ianao mandà ny hiala tsiny .
Fa kosa manao fialantsiny ianao amin'ny antony nahatonga ny zavatra niseho tamin'ny fomba nataony na ny fitondran-tenanao.
Izay mitondra mankany…
6. Mikatsaka ny manome tsiny ny hafa amin'ny zava-drehetra.
Satria tsy manao ratsy ianao, rehefa misy zavatra tsy mandeha amin'ny drafitra amin'ny fiainanao dia mijery avy hatrany ianao hamindra ny tsiny amin'ny olon-kafa.
Tsy misy na inona na inona ratsy ho tompon'andraikitra aminao, fa ny vokatry ny lesoka nataon'ny hafa…
… Na amin'ny alàlan'ny fiainana tsy rariny ary miasa manohitra anao.
Ny sasany amin'ireo izay omenao tsiny dia handray azy tsara ary hanomboka hisalasala ny amin'ny tenany.
Raha averinao hatrany hatrany ity - raha ataonao olona ny maha-zazalahy / zazavavy anao amin'ny famonoana olona - dia mitombo ny fatokisanao tena ao an-tsain'izy ireo.
7. Manararaotra ny hatsaram-panahin'ny hafa ianao.
Feno hatsaram-panahy izao tontolo izao, saingy hitanareo ho toy izao ny fotoana iray ahazoana tombony manokana.
Ianao dia mandray ny fanampiana rehetra azonao atao nefa tsy manome valiny be.
Tsy mampiseho fankasitrahana firy an'ireo olona naneho hatsaram-panahy toa anao akory ianao.
Ao anatin'ny tontolon'ny fanomezana sy fandraisana, tena kely ny zavatra omenao ary be ny azonao.
Io lafiny iray io dia avy fisainana tsy fahampiana ary ny finoana fa mila manangona loharanon-karena ianao - ny fahalalahan-tanan'ny olona amin'ity tranga ity.
Fa inona no mitranga amin'ireo olona izay manome hatrany ireo? Inona no mitranga rehefa maka be loatra ianao?
Naratra aloha izy ireo. Dia nihazakazaka izy ireo.
Miverina amin'ny teboka faha-2 ity ary toa tsy hita amin'ny fiainanao ny olona.
Raha manararaotra azy ireo ianao dia ho tonga saina ry zareo tsy ho ela.
inona no dikan'ny hoe ric flair drip
8. Manala baraka ny olona ianao mba hahazoana sitraka amin'ny valalabemandry.
Efa naneso olona ve ianao mba hampihomehy ny olona sy hitiavany anao bebe kokoa?
Efa nanao an'io ve ianao tao amin'ilay efitrano?
raha namana tsara afaka mahazaka banter namana kely, raha zatra mametraka ny hafa eo alohan'ny vondrona iray dia tsy banter intsony fa poizina.
Ary vao mainka miharihary amin'ny hafa izany raha toa ny ‘banter’ namanareo izay manafika tena amin'ny olona tsy manan-tsiny.
Ilay olona io dia havela hahatsapa ho mahatsiravina amin'ny tenany, izay, araka ny efa noresahintsika, dia marika mampiavaka ny fitondrantena poizina.
Rehefa misy olona manao zavatra manafintohina anao dia tsy misy fomba amelanao azy ireo tsy ho azony.
Na dia miala tsiny aza izy ireo dia hohazoninao an-doha ny ratsy nataony mandritra ny taona maro.
Ary hampahafantarinao azy ireo fa tsy namela heloka na hadinonao ianao.
Tsy maninona ny maha akaiky anao an'io olona io na ny filazanao fa miahy azy ireo ianao.
Angamba ianao handà ny fanasana avy amin'izy ireo ho toy ny foto-pitsipika, na angamba hitondranao azy ireo hatrany hatrany ny tranga hampahatsiahivana azy ireo ny maha-olona ratsy fanahy azy ireo.
Fomba iray na hafa dia hataonao mandoa vola izy ireo noho izay nataony taminao raha nahatonga azy ireo hanisy ratsy.
10. Ataonao manokana ny zavatra.
Ny tsy fitovian-kevitra dia ampahany ara-dalàna sy antenaina amin'ny fiainana, fa ny zavatra dia lasa tena haingana be rehefa tafiditra ianao.
Tsy matahotra ny hanafika ny mpifanandrina aminao ianao amin'ny fifanolanana ary manokana zavatra manokana momba azy ireo izay inoanao fa handratra azy ireo amin'ny fientanam-po.
Azonao atao ny mitondra ny lasany, mikendry ny toetran'izy ireo, maneso ny fomba fijerin'izy ireo na ny fiteniny, lasa manjary manavakavaka, tia olona, ​​na manararaotra amin'ny fomba hafa.
Mazava ho azy fa rehefa vita sy vita daholo dia omenao tsiny izy ireo noho ny nahatonga azy ireo hitondra tena toy ny nataonao.
11. Tsy mankalaza ny fahombiazan'ny hafa ianao.
Rehefa misy zavatra mandeha tsara ho an'ny olon-kafa, rehefa mahatratra na mahomby amin'ny tanjona kendreny dia tsy miara-mankalaza amin'izy ireo ianao.
Tsy milaza fiarahabana na fampisehoana fa faly ho azy ireo ianao.
Azonao atao aza ny manambany ny fandresen'izy ireo ho tsy misy dikany na milaza fa nahazo vintana tamin'ny fomba sasany izy ireo.
Rehefa manao an'izany ianao dia mandroba an'io olona io amin'ny fahatsapana tsara mety ananany momba ilay hetsika.
Ary maharary azy ireo izany.
Karazana olona 20 mahatezitra tokony hohalavirinao (ary tsy tokony ho iray)
Ahoana ny fomba hampijanonana anao mafy loatra
Fa maninona ny olona sasany no ratsy toetra, tsy mahalala fomba ary tsy manaja ny hafa?
Ahoana ny fomba hanehoana fanajana ny hafa (+ Maninona no zava-dehibe eo amin'ny fiainana izany)
Ahoana no tsy dia hitsarana loatra ary hitsahatra tsy hitsara ny olona (sy ny tenanao) amin'ny fomba henjana
12. Mandrahona ny voka-dratsy ianao raha tsy milahatra ny olona.
Ataonao mazava amin'ny olona fa raha hiampita anao izy ireo dia handoa izany.
Matetika, ireny dia fandrahonana manokana fantatrao fa hisy vokany irina ary hahatonga ny olona hanao zavatra araka ny itiavanao azy.
Ireo dia mazàna dia tsy fandrahonana ara-batana (na dia mety ho izany aza), fa kosa fandrahonana ho an'ny fahasalamana ara-tsaina na ara-pihetseham-po.
Na mety fandrahonana hanelingelina ilay olona izy ireo raha tsy mifanaraka amin'ny fanirianao.
Angamba ampiasainao fitaovam-piadiana ny firaisana (ny fihazonana). Angamba mandrahona ny hampitsahatra ny fifandraisana ianareo. Na mety hampiasa fandrahonana handratra tena ianao mba hamitahana olona hanao izay tianao.
13. Tsy milefitra mihitsy ianao.
Izy io dia mifandray amin'ny # 4 sy ny toetranao mifehy.
Rehefa apetrakao mifanohitra amin'ny an'ny olon-kafa ny zavatra ilainao sy ny fanirianao dia tsy vonona ny hanaiky lembenana ianao.
Tsy maintsy mandeha amin'ny làlanao manokana ianao raha tsy izany dia hanao tabataba toy izany ianao mba hampijaly ny ain'ny olon-kafa.
Na ny fanapaha-kevitra ny trano fisakafoanana hisakafoanana, ny fomba handravahana ny tranonao, na ny toerana handefasana ny zanakao hianatra dia tokony hanana ny teny farany ianao.
Ary raha misy olona hafa mijaly vokatr'izany dia tsy miraharaha izany ianao.
14. Tsy azo atokisana ianao raha manafina tsiambaratelo.
Ny fisokafana sy ny fanaovana ny marina amin'ny olona akaiky antsika dia ampahany tena ilaina amin'ny fifandraisana salama, na tantaram-pitiavana, finamanana na amin'ny fomba hafa.
Saingy tsy misy te hisokatra aminao satria tsy hitanao ny tsiambaratelon'ny hafa.
Fa kosa, miharihary ianao mampiharihary ireo tsiambaratelo ireo amin'ny fotoana heverinao fa azo araraotina hanampiana anao amin'ny lafiny sasany.
Na ny fahazoana ny fankasitrahan'ny antoko fahatelo amin'ny alàlan'ny fifosana olona any aoriany na fampiasana azy ireo ho toy ny ampahan'ny fampielezana smear raha misy miampita anao.
Raha misy manambara zavatra misy vokany aminao, dia azo antoka fa handoa ny vidiny ianao amin'ny famadihana sy famadihana anao.
15. Manao hevitra mahatsikaiky sy mahery setra ianao.
Tsy andro iray akory no tsy handraisanao kely ny olona manaloka endrika ho fanehoan-kevitra tsy miandany.
Milaza zavatra toy ny:
“Tena tsara ho an'ny olona mahay izany.” - izay deraina fotsiny.
“Fa maninona ianao no tezitra be?” - izay fanakianana miharihary amin'ny fandraisanao toe-javatra iray.
Ary avy eo dia misy ilay 'Tsara' tsy mety manampy mihitsy ho setrin'ny olona manontany hoe manao ahoana ianao.
Ireo karazana fanehoan-kevitra ireo dia natao hametrahana ilay olona hafa amin'ny tongony aoriana. Nametraka fisalasalana tao an-tsainy izy ireo.
Misy poizina kely izany, sa tsy izany?
16. Mampiasa tsindry ataon'ny namana ianao hahatonga ny olona hanao zavatra tsy tiany atao.
Tsy matahotra ny miantso ny toe-tsain'ny vondrona sosialy ianao hanery ny mpikambana iray hanao zavatra izay tsy tian'izy ireo atao.
Ianao no tompon'andraikitra voalohany mitarika zavatra ary manenjika ny mpandray anjara tsy te handeha hanohitra ny faniriany.
Na ny fahazoana misotro olona betsaka kokoa noho ny mahazatra azy na mandresy lahatra olona iray haka risika mety hisy vokany lehibe dia vonona ianao hanosika azy ireo mafy araka izay takiana.
Izany dia mahatonga ilay olona iray hafa hahatsiaro ho malemy, na hanaraka na tsia.
17. Mikorontana ny toe-tsainao.
Ity farany izay somary mazava kokoa noho ny antony mazava kokoa.
Ny mahasamihafa azy dia ny fampiasanao ny toe-tsainao tsy ampoizina hitazonana ny olona any aoriana.
Satria tsy fantatr'izy ireo hoe iza aminao no hifaneraserany, terena handeha amin'ny zoro atody ny olona iray noho ny tahotra azy mitaona anao .
Ary rehefa manao zavatra tsy hampifaly anao izy ireo dia mety hiatrika barila roa ity olona mahantra ity.
Miverina amin'ny fifehezana sy hery tianao ampiharina amin'ny hafa io.
Ahoana no hampijanonana ny fiankinan-doha
Raha afaka mifandray sy manaiky ireo teboka etsy ambony ianao dia efa nanao ny dingana voalohany sy mafy indrindra…
… Nanaiky ianao fa mampiseho fihetsika misy poizina indraindray.
Aza atao ambanin-javatra izany.
Betsaka ny olona izay faritanao fa misy poizina no tsy mahalala ny fihetsiny.
Tsy tsapan'izy ireo ny fahavoazana ateriny amin'ny hafa.
Ary tsarovy fa io fahavoazana io no mamaritra ny zavatra misy poizina.
Mba handrosoana sy hampihenana, avy eo esory ireo fihetsika tsy ilaina ireo, misy zavatra maromaro azonao atao.
1. Fantaro fa tsy ‘poizina’ ianao.
Na dia efa niresaka momba ny fomba maro aza isika izay mety hanapoizina sy hanimba ny hafa ny teny sy ny fihetsika ataon'ny olona iray, dia zava-dehibe ny manantitrantitra fa tsy misy poizina ny olona iray.
Tsy misy olona mety hiteraka fahavoazana amin'ny olon-kafa amin'ny alàlan'ny fisiany fotsiny.
Ny zavatra tokony hiasao dia ny fihetsikao.
Izay ataonao sy lazainao no azo soratana fa misy poizina. Noho izany amin'ny firesahana ireo zavatra ireo dia azonao atao ny manakana ny fanapoizinana.
Tsia, tsy ho mora foana izany, indrindra rehefa raikitra ao anaty tsy fahatsiarovanao ny fitondran-tena, fa miaraka amin'ny ezaky ny fiaraha-miasa sy ny fanampian'ny mpanolotsaina voaofana na mpitsabo dia azo atao izany.
2. Fantaro izay fihetsika misy poizina asehonao.
Mora ny manilika ny maro amin'ireo teboka etsy ambony ary mandà fa mety indraindray ianao, tsy fanahy inianao no meloka ho azy ireo.
Raha te-hiatrika ny fihetsika misy poizina ianao dia tokony ho fantatrao hoe inona izany.
Tokony ho azonao atao ny mamantatra ny fotoana nahavoa olona hafa sy ny fomba nanaovanao izany.
Manoratra amin'ny diary dia afaka manampy anao hanaraka ny fifandraisanao mandritra ny andro, indrindra ireo izay nipoiran'ny fifandonana sy ny toerana mety nahatonga anao handratra olona iray hafa.
Raha hitanao ny maodely amin'ny fitondran-tena sy ny tohan-kevitra mitovy amin'ny fandefasana imbetsaka, dia ho fantatrao fa ireo no zavatra mila iasanao.
3. Fantaro fa ny fiainana dia tsy kilalao aotra.
Raha mijery ireo teboka etsy ambony indray ianao dia ho hitanao fa maro amin'izy ireo no miorim-paka amin'ny finoana fa mba handresenao dia misy olon-kafa tsy maintsy resy.
Fantatra amin'ny lalao zero-sum izany. Ny hevitra dia tsy misy afa-tsy loharanom-pahalalana marobe atolotra, ary mba hampitomboana ny anjaranao dia tsy maintsy ahena ny anjaran'ny olona iray.
Ka mitsikera ianao, mifehy, manome tsiny, manararaotra, manao fandrahonana…
… Izy rehetra mba hahazoana antoka fa ny anjaranao amin'ny pie amin'ny fiainana dia mety maniry na tsy mihena noho ny fihetsiky ny hafa.
Saingy ny lalao dia tsy kilalao aotra.
Raha ny marina dia saika ny mifanohitra tanteraka no izy.
ny fomba hitsaharana tsy fankahalana olona namadika anao
Ny fiainana dia momba ny synergy ary ny fiaraha-miasa mba hampitomboana ny anjaran'ny tsirairay avy amin'ny pie tsy mitsaha-mitombo.
Ireo olona afa-po indrindra, ary faly indrindra amin'ny fizotran'ny fiainany, dia ireo izay mandray anjara amin'ny fiainan'ny hafa amin'ny fomba tsara.
Fantatr'izy ireo fa ny fomba tsara indrindra 'handresena' amin'ny fiainana dia amin'ny fanampiana ny hafa handresy koa.
Azo antoka fa mety tsy ho marina foana izany eo amin'ny tontolon'ny fandraharahana, fa amin'ny sehatra midadasika sy manan-danja kokoa, dia afaka jerena sy tsapan'ireo izay miaina toy izao.
Ka isaky ny mahita ny tenanao mino ianao fa mahazo tombony amin'ny fanararaotana ny hafa dia ajanony ary tadidio fa eo amin'ny tontolon'ny fiadanam-po ara-pihetseham-po sy ny fifandraisana, 2 + 2 = 5.
4. Manontania foana raha manimba hafa ianao.
Ny ampahany lehibe indrindra amin'ny famahana ny fihetsika misy poizina dia ny fandinihana aloha ny vokatry ny fihetsikao amin'ny hafa.
Raha misy ny loza mety hitranga dia famantarana izany fa tsy tokony hotohizana izany fihetsika izany.
Midika izany fa mijanona mankany mieritrereta alohan'ny hitenenana na mihetsika.
Midika izany fa ny fiheverana ny fihetseham-pon'ny olon-kafa isaky ny manao zavatra ianao.
Tafiditra amin'ny fangorahana iray izany mba hahafantarana tsara ny vokatry ny fihetsikao amin'ireo manodidina anao.
Anontanio foana: ny zavatra efa hataoko ve dia hanimba olona?
Tsy asa mora velively izany. Imbetsaka isika no mihetsika nefa tsy mieritreritra.
Na dia tsy maintsy mieritreritra ny vokany aza ianao rehefa jerena aloha, dia tsy ho ela manaova fahazarana ny fandinihana ireo olona hafa amin'ny fiainanao alohan'ny hanaovana zavatra.
5. Fantaro ny tenanao.
Ny olona sasany dia mety mampiseho fihetsika misy poizina satria izany no heverin'izy ireo fa tokony hataon'izy ireo.
Hitan'izy ireo ny olon-kafa manao izany ary mino izy fa izany no fomba tsara hihetsika.
Na latsaka ao anaty lamin'ny fitondran-tena fotsiny izy ireo satria tsy mahita fomba hafa.
Matetika, miafina ity lalana samihafa ity satria tsy fantany ny tenany sy ny fijoroany.
Rehefa tsy fantatrao izay tena soatoavinao dia mora ny mihetsika amin'ny fomba mamadika azy ireo.
Fa raha manomboka amin'ny dia hahitanao tena ianao dia ho tsapanao fa zava-dehibe aminao izany ary afaka hiaina ny fiainanao mifanaraka amin'izany ianao.
Mety mila taona maro vao tena hahalalanao izay inoanao fa lalina, saingy ho tonga ianao ary ity dingana ity dia matetika mitaky fikolokoloana fihetsika misy poizina.
Manehoa hatsaram-panahy amin'ny tenanao nandritra izay fotoana izay. Tsy isalasalana fa hanohy handratra ny hafa ianao rehefa mianatra izay misy sy tsy mety hatao amin'ny toe-javatra misy.
Aza manasazy ny tenanao amin'ireto slip ups ireto, fa raiso ho toy ny fotoana ilaina amin'ny fianarana sarobidy izy ireo.
Mieritreritra ianao fa mety poizina ary maniry fomba manokana hijanonana? Miresaha amin'ny mpanolotsaina iray androany izay afaka mitarika anao mandritra ilay fizotrany. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
inona no hatao rehefa mankaleo irery
ny fomba hanombohana hatoky olona indray
ahoana ny fomba hiderana lehilahy amin'ny endriny
ny fomba fitantanana ny maha-empath